Lozam-pifamoivoizana Tafiditra tambany kamio ilay Renault Express
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ny 14 Jolay teo sahabo tamin’ny 5 ora sy sasany hariva teo amin’ny lalam-pirenena RN1 bis, PK 28, tao Mahatsinjo, ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ankadinondry, Distrika Tsiroanomandidy.
Mpandeha 9 tamin’ny fiara marika “renault express” iray no naratra mafy. Vokatry ny fandehanana mafin’io fiara iva sady madinika io ka nifatratra tany ambany kamiô izay nifanena taminy. Tanora vao erotrerony eo anelanelan’ny 16 ka hatramin’ny 23 taona avokoa ireo mpandeha lasibatra, izay avy ao Antsahatanteraka. Nentina nihazo ny toeram-pitsaboana any an-toerana ireo naratra. Ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena Ankadinondry no nidina tany ifotony nandray an-tanana ny fanadihadiana. Araka ny voalazan’ny mponina, mateti-pitranga ny loza amin’io toerana io noho ny hatsaran’ny lalana ka mampirimorimo ireo fiara. Saingy somary tery no ahitana fiolahana tampoka ka miafara amin’ny fifanatrehana toy izao matetika.